Dastabej » यहाँको जडीबुटी यही प्रशोधन हुन्छ, रोजगारी मिल्छ — मन्त्री हमाल
यहाँको जडीबुटी यही प्रशोधन हुन्छ, रोजगारी मिल्छ — मन्त्री हमाल – Dastabej
यहाँको जडीबुटी यही प्रशोधन हुन्छ, रोजगारी मिल्छ — मन्त्री हमाल
लुम्बिनी प्रदेश तराई, पहाड र हिमाल मिलेर बनेको प्रदेश हो । यो प्रदेश बनजंगल, डाँडापाखा, ताल तलैया, कुलाकन्डराले भरिपुर्ण छ । बिभिन्न प्रकारको हावापानी पाइने भएकाले प्रकृतिक बिविधाता बोकेको प्रदेशकोरुपमा यो प्रदेशलाई चिनिन्छ । यहाँको बनजंगल, चुरे पहाड, बाताबरण संरक्षण गर्नका लागि योजना के छ त ? सहकर्मी शम्भु थारुले लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त बन बताबरण तथा भु—संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र हमालसंग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
तपाई वन बाताबरण तथा भु—संरक्षण मन्त्री भैसकेपछि कसरी काम गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
म मन्त्री भैसकेपछि केही बिज्ञ साथीहरुसंग सल्लाह गर्दै छु । यो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको जुन बनजंगलहरु छन्,ती बनजंगलको संरक्षण कसरी गर्न सक्छौ । यहाँ डढेलोहरु लाग्ने गर्दछन् ? त्यसलाई जनचेतना मार्पmत कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भुक्षयहरु हुन्छ त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ ? भनेर आज मैले भर्खरै एकजना बनबिज्ञ हाम्रै बाँकेको हुनुहुन्छ, तामाँग दाई । उहाँलाई भेटेर आउदै छु र सरसल्लह गर्दै छु । मैले हाम्रो नगरलाई हराभरा बनाउने ।
नेपालगन्ज र कोहलपुरको बीचसडकमा रुख रोपेर कसरी हराभरा बनाउने । त्यसैगरी घोराही र तुलसीपुर, भैरहवा र बुटवललाई कसरी हराभरा बनाउने मैले त्यो बिषयमा साथीभाईहरुसंग राय सुझाव लिइरहेकोछु । साथीभाईहरुको राय के छ भने अब हामीले सानो रुख लगाउनु हुदैन अब हामीले ठुलो रुख लगाउनु पर्छ । सनो रुख बचाउँन गाह्रो छ ।
पाँच सात फिटको रुख लगायौ, त्यसको संरक्षणमा समय खर्च गर्न पर्दैैन र जसले गर्दा रुख जोगिन्छ भन्ने एउटा सल्लाहहरु आएको छ । मलाई पनि चित्त बुझेको छ र म त्यता पनि लाग्छु । हाम्रो चुरे पहाड छ त्यहाँ हरियाली अलि कम छ । साथीहरुले पनि मलाई भन्ने गरेकाछन् ।
त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । कसरी त्यहाँ रुखबिरुवा लगाउँन सकिन्छ भन्ने बिषयमा पनि साथीभाईहरुसंग कुरा भैरहेको छ । मैले मन्त्रालयका साथीहरुलाई भनेको छु अब हामीले हचुवाको तालमा काम गर्नु हुदैन । प्लानीङ वे मा काम गर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा कुन रुख लगाउँदा उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो प्रदेशमा १२ वटा जिल्ला छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा हावापानी माटो कस्तो छ ? सोही अनुसारको उपयुक्त बिरुवा लगाउनु पर्छ । यहाँहरुलाई थाहाँ छ, हाम्रो प्रदेश तराई पहाड र हिमाल तीनै क्षेत्र मिलेर बनेको प्रदेश हो । हिमालमा लगाउने रुख हिमालमा लगाउँनु पर्छ ।
पहाडमा लगाउने रुख पहाडमा लगाउनु पर्छ र तराईमा लगाउने रुख तराईमा लगाउनु पर्छ भनेर मैले कर्मचारी साथीहरुसंग सल्लाह गरेको छु र निर्देशन पनि दिएको छु । अब त्यई हिसाबले मेरो मन्त्रालयलाई छिटो समयमा राम्रो प्रतिफल दिने गरी इमानदारीसाथ अगाडी बढ्छु ।
जस्तै मन्त्री ज्यु । बाढीपीडितको नाममा बनजंगल अतिक्रमण भएको छ अब त्यसलाई संरक्षण गर्नका लागि के गर्नु हुन्छ ?
नाई । नाई । प्रमुख जिम्मेबारी त्यो पनि हो । बन अतिक्रिमण हुनुहुदैन । मलाई लाग्छ बन अतिक्रमण यो भन्दा अगाडीको सरकारले पनि अतिक्रमण रोक्न प्रयास गरेकै हो तर कति सक्नुभो कति सक्नुभएन मैले भन्न सक्दैन । त्यो अतिक्रमण हामीले पनि रोक्नु पर्छ । यति अतिक्रमण रोकेनौ भने यहाँको जलबायु परिवर्तन हुदैछ । अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि जलबायु एकदमै बिग्रिसकेको अवस्था छ । आज कोभिडदेखि हामी धेरै परेसान छौँ । त्यो कोभिड रोक्नका लागि पनि हामी यहाँको हावापानी पनि शुद्ध हुनैपर्छ ।
मैले एउटा सामाजिक संञ्जालमा पढेको थिए । एउटा पहाडको मन्छेलाई कोभिड लागेको थियो । उसले कोभिड ठिक गर्नका लागि उसले ठुलो पिपलको रुखमुनि १५ दिन बसेर कोभिड ठिक गरेको पनि समाजिक संञ्जालमा पढेको थिएँ । यदी बातबरण शुद्ध हुन सकेन । रुखबिरुवा रोप्न सकेनौं भने त्यहाँ अतिकति गाह्रो चाही हुन्छ । त्यसकारणले हामीले जलबायु परिवर्तन रोक्नु पर्छ । र भुक्षयका कुराहरु पनि यदी हामीले रुखहरु रोप्यौंँ भने त्यसले मनिसलाई पनि प्राण दिन्छ जिवजन्तुलाई पनि प्राण दिन्छ सबैलाई प्राण दिन्छ । त्यसकारण अहिलेको अवश्यकता भनेको रुखचाही रोप्नु हो ।
जस्तै बढ्दो बन अतिक्रमण, बढ्दो शहरीकरणका कारणले जलवायु परिवर्तन भैरहेको छ यसलाई नितिगत रुपमा सम्बोधन गर्न कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ ?
त्यसको लागि अब हाम्रो मन्त्रालयका साथीहरुसंग छलफलहरु हुन्छ । त्यसले केही बाटो निकाल्छ । छलफलको बाटोबाट आगाडी बढ्दा राम्रो हुन्छ । अहिले मैले एक्लैले यस्तो गर्र्छु भन्दा त्यो सन्र्दभिक र बैज्ञानिक नहुन पनि सक्छ । त्यसकारण एक्सपर्ट साथीहरुछन् मैले उनीहरुसंग छलफल गनै बाँकी छ । अब यहाँलाई थाहा छ मैले असोजको २४ गते सपथ ग्रहण गरेको हो ।
२५ गते एक दिन अफिस खुल्यो । २६ गते दशैको बिदा भयो । मैले साथीहरुसंग राम्रो संग छलफल गर्न पाएको पनि छैन । खाली मैले के भनेको छु भने अब हामीले दुर्तगतिमा काम गर्नु पर्छ । र एउटा निर्देशन के गरेको छु भने अब हाम्रो जंगलमा सडेगलेको काठहरु छन् कुकाठहरु जुन काठ बास्तबमा काम लग्दैनन् ।
बर्षा घाम पानीले त्यो काठ एकदमै सड्ने अवस्थामा छ । यदी दुई बर्ष त्यो त्यस्तै रह¥यो तेले राज्यलाई एक पैसा पनि दिदैन । तर अहिले त्यसलाई प्रक्रिया पु¥याएर बिक्रिबितरण ग¥यो भने त्यसबाट जनताले पनि फाइदा पाउने र राज्यलाई आम्दानी हुने भन्ने बिषयमा मैले त्यो एउटा निर्देशन दिएको छु त्यो मलाई लाग्छ छिटै हुन्छ । र मेरो मुख्य मन्त्रीसंग पनि कुरा भएको छ । हाम्रो यो बाँके जिल्ला यो प्रदेशमा एउटा जडिबुटीको लागि ठुलो हव जस्तो पनि छ । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको सेन्टरमा पर्छ । त्यो बाँके जिल्लामा एउटा ठुलो जडिबुटी प्रशोधन कारखाना खोल्ने भन्ने कन्भिन्स मैले मुख्य मन्त्रीलाई गरेको छु । त्यतातिर पनि हामीले प्रयात्न गर्दै छौँ । त्यसले युवासाथीहरुलाई रोजगारी पनि प्रदान गर्छ र हाम्रो प्रदेश समृद्ध हुन्छ ।
बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गरेर तपाई लुम्बिनी प्रदेशको बन वाताबरण तथा भु—संरक्षण मन्त्री हुनु भो । अब बाँकेबासीले तपाईबाट के आपेक्षा गर्न सक्छन् ?
अपेक्षा भनेको पनि त्यै हो । मैले छोटो समयमा यहाँको साथीहरुलाई रोजगारी दिन सक्नुपर्छ । जस्तो मैले जडिबुटी कारखानाको कुरा गरे । त्यो जडीबुटी कारखानाबाट सायौं साथीहरुले रोजगारी पाउँछन् । र यहाँ के भने जुन प्रशोधनको लागि जडिबुटी भारत जान्थ्यो त्यो जाना बन्द हुन्छ । त्यसलाई हामीले नै प्रशोधन गरेर हामीले नै प्रतिफल लिन सक्छौँ ।
यस्ता यस्ता कुराहरु अब त्यसपछि बाताबरण शुद्ध राख्नका लागि सडकको छेउछाउ र बिचमा रुखहरु लगाउने मैले मेरो मन्त्रालयबाट गर्ने कुराहरु मैले त्यसरी नै अगाडी बढ्छु । र म बिश्वास पनि दिलाउँछु कि इमान्दारिका साथ काम गर्छु । र मैले गरेको कामबाट भोलि जनताले प्रतिफल पाउनु हुन्छ भन्ने म मा बिश्वस्त छु ।
३ कार्तिक २०७८, बुधबार १७:१६ प्रकाशित